कतै तपाई पनि यस्ता सपना त देख्नु भएको छैन ? « Sansar News
कतै तपाई पनि यस्ता सपना त देख्नु भएको छैन ?
७ बैशाख २०७९, बुधबार १२:२२
सपना विज्ञान अनुसार, सपना पहिले नै एक व्यक्ति को जीवन मा आगामी घटनाहरु को संकेत गर्दछ। सपना शास्त्रमा यस्ता केही सपनाहरू बताइएका छन् जसलाई अशुभ मानिन्छ। त्यसोभए यी सपनाहरूको बारेमा जानौं।
सुत्दा सबैले सपना देख्छन् । ती सपनाको अर्थ पनि बिभिन्न तरिकाले लगाउने गरिन्छ । कसैले सपना देख्दा आनन्द मानेर ब्युँझन नपरे हुन्थ्यो भन्छन् भने केही सपना यति नराम्रा हुन्छन् कि मानिसहरु डरले तत्कालै ब्युझेर बस्ने गर्छन् । सपना शास्त्रका अनुसार हरेक सपना निश्चित रूपमा कुनै न कुनै कुरासँग सम्बन्धित हुन्छन् ।
यो कुनै शुभ वा अशुभ घटनाको संकेत पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा धेरै पटक मानिसले यस्तो सपना देख्छ कि त्यसको अर्थ जान्न निकै उत्सुक हुन्छ । सपना शास्त्रमा सपनाको राम्रो र नराम्रो अर्थको विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । जान्नुहोस् केहि यस्ता सपनाहरुको बारेमा जसलाई हेर्नुको अर्थ अशुभ हुन्छ ।
सपनामा समुन्द्र देखेमा अशुभ मानिन्छ । यस्तो सपना कसैसँग झगडा हुने संकेत हुन सक्छ । त्यसैले यस्तो सपना देख्नुभयो भने त्यसदिन आफ्नो बोलीलाई नियन्त्रणमा राख्नुस् ।
सपनामा सूर्यास्त देख्नु पनि अशुभ मानिन्छ । सपना शास्त्रका अनुसार यस्ता सपनाको अर्थ आगामी दिनमा कुनै अशुभ घटना घट्ने देखिन्छ ।
घोडा खसेको हेर्दै
यदि कुनै व्यक्तिले सपनामा घोडाबाट लडेको देख्छ भने, यसको मतलब आगामी दिनमा ती व्यक्तिको करियरमा कुनै प्रकारको बाधा आउनेछ । त्यसैले सर्तक रहेर कामहरु अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
कुनै व्यक्तिले सपनामा कैंची चलाएको वा अर्कैले दौडिरहेको देखेमा अशुभ मानिन्छ, यसको अर्थ व्यक्तिको दाम्पत्य जीवनमा ठूलो समस्या आउन सक्ने सपना शास्त्रले भन्छ । त्यसैले व्यक्तिले आफ्नो सम्बन्धलाई संयमका साथ सम्हाल्नु पर्छ ।
घरको पाहुना आएको देख्नु
यदि कुनै व्यक्तिले सपनामा घरमा पाहुनाको आगमन भएको देख्छ भने यसको अर्थ आगामी दिनमा कुनै विपत्ति आउन लागेको छ । तसर्थ, यदि तपाइँ यस्तो सपना देख्नुहुन्छ भने, हरेक समय साबधान भएर कदम चाल्नुपर्छ ।